အသက်ကြီးမှ အချစ်စစ်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး လက်ထပ်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ သက်ကြီးစုံတွဲ – One Daily Media
အသက်ကြီးမှ အချစ်စစ်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး လက်ထပ်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ သက်ကြီးစုံတွဲ
Songkhla ခရိုင်၊ Saba Yoi ကျေးရွာမှာ မင်္ဂလာဆောင် အခမ်းအနားတစ်ခုကို ကျင်းပခဲ့ပါတယ် ။ အသစ်စက်စက် စုံတွဲလေးရဲ့ ရယ်စရာကောင်းမှုနဲ့ ချစ်စရာကောင်းမှုတို့ကို ဖန်တီးတဲ့ အခမ်းအနားတစ်ခုပါ ။ Ms. Wilai Mooksitchinda အမည်ရှိ အသက် (၆၇) နှစ် သတို့သမီးနဲ့ Mr.Lap Chaikwan အမည်ရှိ အသက် (၈၀ နှစ်) သတို့သား တို့ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်ခန့်က ရွာအကြီးအကဲများရဲ့ ပါတီပွဲမှာ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး သူတို့ရဲ့ ဘဝအဆုံးမှာ အတူတကွနေထိုင်ရန် သဘောတူခဲ့ကြပါတယ် ။ သတို့သား Mr. Lap က သူရဲ့ပထမဇနီးနဲ့အတူ သားသမီး ၃ ဦး ထွန်းကားခဲ့ပြီး သတို့သမီး Ms. Wilai ကလည်း သမီး ၃ ဦးရှိပြီး ခင်ပွန်းဟောင်းက မကြာသေးခင်ကဘဲ ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာပါ ။ သတို့သား Mr. Lap က သတို့သမီးကို ငွေ ၉၉.၉၉၉ ဘတ်၊ ခန်းဝင်ပစ္စည်း၊ ရွှေ ၁ ဘတ်၊ လည်ဆွဲ ၁ ခု၊ ရွှေလက်စွပ် တို့ဖြင့် လက်ထပ်ခွင့်တောင်းခဲ့ပါတယ် ။
သက်ကြီးစုံတွဲနှစ်ဦးရဲ့ ဆွေမျိုးများ၊ အဘိုးအဘွားအသင်းဝင်များနဲ့ ရွာသူရွာသားများက သူတို့ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲအတွက် အားတက်သရောပါဝင်ကူညီပြီး Saba Yoi ခရိုင်၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှ ဝန်ကြီးချုပ် Mr. Panya Srithongsuk က မင်္ဂလာဆောင်အခမ်းအနားကို ဦးဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ် ။ ဒီချစ်စဖွယ်စုံတွဲလေးနှစ်ဦးအတွက် သူတို့ရှေ့ဆက်မဲ့ ဘဝခရီးလမ်းကို အတူအတကွလျောက်လှမ်းပြီး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အမြဲချစ်နိုင်ကြပါစေလို့ ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ ဆုတောင်းပေးပါတယ် ။
Songkhla ခရိုငျ၊ Saba Yoi ကြေးရှာမှာ မင်ျဂလာဆောငျ အခမျးအနားတဈခုကို ကငျြးပခဲ့ပါတယျ ။ အသဈစကျစကျ စုံတှဲလေးရဲ့ ရယျစရာကောငျးမှုနဲ့ ခဈြစရာကောငျးမှုတို့ကို ဖနျတီးတဲ့ အခမျးအနားတဈခုပါ ။ Ms. Wilai Mooksitchinda အမညျရှိ အသကျ (၆၇) နှဈ သတို့သမီးနဲ့ Mr.Lap Chaikwan အမညျရှိ အသကျ (၈၀ နှဈ) သတို့သား တို့ဟာ လှနျခဲ့တဲ့ တဈနှဈခနျ့က ရှာအကွီးအကဲမြားရဲ့ ပါတီပှဲမှာ တှဆေုံ့ခဲ့ပွီး သူတို့ရဲ့ ဘဝအဆုံးမှာ အတူတကှနထေိုငျရနျ သဘောတူခဲ့ကွပါတယျ ။
သတို့သား Mr. Lap က သူရဲ့ပထမဇနီးနဲ့အတူ သားသမီး ၃ ဦး ထှနျးကားခဲ့ပွီး သတို့သမီး Ms. Wilai ကလညျး သမီး ၃ ဦးရှိပွီး ခငျပှနျးဟောငျးက မကွာသေးခငျကဘဲ ကှယျလှနျသှားခဲ့တာပါ ။ သတို့သား Mr. Lap က သတို့သမီးကို ငှေ ၉၉.၉၉၉ ဘတျ၊ ခနျးဝငျပစ်စညျး၊ ရှေ ၁ ဘတျ၊ လညျဆှဲ ၁ ခု၊ ရှလေကျစှပျ တို့ဖွငျ့ လကျထပျခှငျ့တောငျးခဲ့ပါတယျ ။
သကျကွီးစုံတှဲနှဈဦးရဲ့ ဆှမြေိုးမြား၊ အဘိုးအဘှားအသငျးဝငျမြားနဲ့ ရှာသူရှာသားမြားက သူတို့ရဲ့ မင်ျဂလာပှဲအတှကျ အားတကျသရောပါဝငျကူညီပွီး Saba Yoi ခရိုငျ၊ အုပျခြုပျရေးမှူးရုံးမှ ဝနျကွီးခြုပျ Mr. Panya Srithongsuk က မင်ျဂလာဆောငျအခမျးအနားကို ဦးဆောငျပေးခဲ့ပါတယျ ။ ဒီခဈြစဖှယျစုံတှဲလေးနှဈဦးအတှကျ သူတို့ရှဆေ့ကျမဲ့ ဘဝခရီးလမျးကို အတူအတကှလြောကျလှမျးပွီး တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ အမွဲခဈြနိုငျကွပါစလေို့ ဂုဏျပွုတဲ့အနနေဲ့ ဆုတောငျးပေးပါတယျ ။